एसी चलाउँदा कारोना भाइरस संक्रमणको जोखिम हुन्छ कि हुँदैन ? – Clickmandu
एसी चलाउँदा कारोना भाइरस संक्रमणको जोखिम हुन्छ कि हुँदैन ?
बीबीसी २०७७ वैशाख ४ गते १३:५३ मा प्रकाशित
सामन्यतया चैत बैशाख गर्मी हुने समय हो । चैत लागेपछि गर्मी शुरु हुनुपर्ने हो । तर यो वर्ष भने वैशाख लागेपनि नेपालमा गर्मी शुरु भइसकेको छैन । तर अघिल्ला वर्षमा यी दिनमा निकै गर्मी हुन्थ्यो ।
गर्मीबाट बच्नका लागि पछिल्ला वर्षहरुमा एसीको प्रयोग निकै बढेको छ । तर यतिबेला विश्वभरी नै एसीको प्रयोग न्यून गर्नुपर्ने भन्ने चर्चा पनि निकै चल्न थालेको छ । यसको प्रयोगले संक्रमण फैलाउने जोखिम बढ्ने जस्ता चर्चा सामाजिक सन्जालमा पनि देखिन थालिएको छ ।
यतिबेला सबैको मनमा उब्जेको एउटा प्रश्न के हो भने के कोरोनाको संक्रमण भएको समयमा एसीको प्रयोग ठीक छ ?
विज्ञ डा. रणदीप गुलेरियाले एक टेलिभिजन च्यानलसँग कुराकानी गर्दा भनेका थिए, ‘एसी चलाउनु भनेको त्यत्ति ठूलो समस्या होइन जति क्रस भेन्टिलेसनका कारण हुन्छ ।’
डा. गुलेरियाका अनुसार, यदि तपाईले आफ्नो घरमा एसी राख्नु भएको छ भने त्यो कोठामा पर्याप्त मात्रामा हावा हुन्छ । त्यो हावा अन्यत्र कोठामा जान पाउँदैन । एक कोठाबाट अर्को कोठामा हावा नजाने भएकाले यसमा कुनै समस्या छैन ।
तर हामीले ध्यानमा राख्नु विषय के हो भने कोठामा राखेको एसीको हावा बाहिर जाने खालको पनि हु्नुपर्छ । एसी भएको ठाँउमा धेरै मानिस बस्नु पनि हुँदैन ।
डा. गुलेरियाका अनुसार यदि कार्यालय वा सार्वजनिक स्थानमा एसी छ भने त्यो हावा निश्चित कोठामा मात्रै सीमित हुन्छ । यही हावा सबै कोठामा गयो भने डर हुन्छ । हावा भएको कोठामा कोही व्यक्ती कोरोना संक्रमित भएको खण्डमा एसीको नलीद्वारा एक कोठाबाट अर्काे कोठामा यो संक्रमण फैलिने खतरा हुन्छ ।
अस्पतालमा बन्द भयो एसी
यतिबेला विश्वभर कोरोनाको संत्रास बढेको छ । जहाँ-जहाँ कोरोनाको असर रहेको छ ती बिरामी जुन जुन अस्पतालमा उपचार गरिरहेका छन, ती अस्पतालमा एसी बन्द प्रायः गर्न थालिएको छ ।
डा. गुलेरियाका अनुसार अस्पतालमा एसी आवश्यक छ । जब गर्मी बढ्दै जान्छ, तब डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीमा भने समस्या लेखिन थाल्छन् । यो बेलामा डाक्टरकहरुले पीपीई लगाएर बिरामीको उपचार गरिरहेका हुन्छन् । पीपीई लगाएर उपचार गर्नुपर्ने त्यसमा पनि गर्मीमा उपचार गर्नुपर्दा समस्या हुने गर्दछ ।
रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अमेरिकी केन्द्रले एक अनुसन्धान गरेको छ । चीनको एउटा रेष्टुराँमा कोविड-१९ को प्रचारप्रसारको लागि कस्तो वाताबरण छ भनेर हेरिएको थियो । यो अध्ययन रोग नियन्त्रण र रोकथामको लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिवेन्सनीले पनि अनुमोदन गरेको छ ।
यो अनुसन्धानका अनुसार जनवरी २६ देखि १० फेब्रुअरी २०२० सम्म कोरोना भाइरसले तीन परिवारका १० व्यक्तिलाई असर गर्याे । ती सबैले चीनको गुआन्जाउ शहरको वातावरणनुकुलित रेष्टुराँमा खाना खाए । सबै टेबलको दूरी लगभग एक मिटरको थियो ।
यीमध्ये एक परिवार चीनको वुहानबाट फर्के । २४ जनवरीको दिन परिवारले एक रेस्टुराँमा खाना खाएका थिए । त्यो परिवार बी र सी सदस्यहरु उनीहरुसँगै टेबलमा बसेका थिए ।
ए परिवारको एक सदस्यमा अर्काे दिन कोरोनाको लक्षण देखिन थाल्यो । फेब्रुअरी ५ मा त्यस परिवारका थप चार सदस्यहरूमा र परिवार बी का तीन र परिवार सी का दुई सदस्यहरूमा पनि यसको संक्रमण देखियो । यो रेष्टुराँ ५ तलाको थियो । जहाँ एसी पनि थियो ।
अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार संक्रमणको मुख्य कारण हावा प्रवाह नै थियो । अनुसन्धानले सुझाव दियो कि कोविड १९ रोक्नका लागि भेन्टिलेसन सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अमेरिकी केन्द्रले यसलाई स्वीकार गरेको छ । उसले हावामा सार्ने ट्रान्समिट मार्गको अध्ययन गरेको थिएन र त्यहाँ खाने मानिसहरूका नमूनाहरू अध्ययन गर्न असमर्थ भएको थियो ।
अनुसन्धानका अनुसार कुनै रेस्टुराँमा कर्मचारी वा त्यहाँ खाने अन्य व्यक्ति प्रभावित भएनन् ।
पछि यो प्रकोप ड्रपलेट प्रसारणको कारण हुन सक्छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो । यद्यपि अनुसन्धानले भन्छ कि यो एक मात्र कारण हैन । ठूला श्वासप्रश्वासका थोपाहरू केही समयको लागि हावामा रहन्छन । र धेरै छोटो दूरीका लागि जान सक्छ । तसर्थ, अनुसन्धानमा भनिएको थियो कि एयर कन्डिसनरको कडा एयरफ्लोको कारण यो समस्या देखिन सक्छ । जसका कारण बु्ढाबूढीहरू एउटा टेबुलबाट अर्को टेबुलमा सार्न आवश्यक छ ।
यस बारेमा, दिल्लीको म्याक्स अस्पतालका आन्तरिक चिकित्सा निर्देशक डा. रोमेल टिकू भन्छन, ‘यस्तो खालको वा खोक्रो भाइरस एयर कन्डिसनको माध्यमबाट हावामा सर्छ र सबैजना संक्रमित हुन्छन भन्ने छैन ।’
अहिलेसम्म यसको कुनै प्रमाण फेला परेको छैन । यसले निश्चित संक्रमण हुनसक्छ ।
केही दिनअघि, भारतको महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्रीले मानिसहरूलाई एयर कन्डिसन प्रयोग नगर्न सल्लाह दिएका थिए । उनले भने ‘अनावश्यक चिसो, चिस्यानबाट जोगिनु पर्छ ।’
मार्च २१ मा, महाराष्ट्र सरकारले एक सर्कुलर जारी गरेर घरमा सूर्यको प्रकाशलाई छिर्न दिनको लागि झ्याल खुला राख्न र अति आवश्यक परेमा मात्रै एसी चलाउन भनिएको छ ।
महाराष्ट्रका स्वास्थ्य मन्त्री राजेश टोपेले भनेका थिए कि कोविड–१९ भाइरस एसी डक्ट र भेन्टमार्फत् गर्न सकिन्छ । त्यही समयमा मार्चमा कर्नाटक सरकारले रेष्टुराँलाई एयर कन्डिसनर रोक्न निर्देशन पनि दियो ।
अहिले विश्वका अधिकांश देशमा बन्दाबन्दीको अवस्था रहेको छ । होटल रेष्टुरेन्टसहित सार्वजनिक ठाउँहरू बन्द छन् । थुप्रै व्यक्तिहरू कार्यालयको सट्टा घरबाट काम गरिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूलाई सेन्ट्रल एसी प्रदान गरियो । सेन्ट्रल एसीले भाइरस फैलाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न निकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
यसमा डा. रोमेल टीकू भन्छन्, ‘अझै कुनै निश्चित भएको छैन, हावाको कारण भाइरस रिसाइकल भएको हो भन्ने विषयमा पनि अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन ।’
उनका अनुसार, एयर कन्डिसन फिल्टरले भाइरस समात्छ । भाइरस एसीको नली र निकासमा पनि हुन्छ । तर एसीमार्फत् भाइरस प्रसारित हुनसक्ने कुनै प्रमाण छैन, यसले यसमा कति सक्रिय हुनसक्छ र यो त्यहाँ कति लामो समयसम्म रहन सक्छ, किनकि यसको वातावरण, त्यहाँ तापमान र आद्रता जस्ता धेरै कारकहरू रहेका छन् ।
डा. रोमेलका अनुसार अस्पतालहरूमा पनि सेन्ट्रल एसी बन्द गर्न सावधानी अपनाईदैछ, यो एक नयाँ भाइरस हो । यसमा सबै सचेत हुन आवश्यक छ ।